Mitombo ny fikarohana eo an-toerana, eo amin'ny sarintany ve ianao? | Martech Zone
Alarobia, Aprily 1, 2009 Talata, Jona 23, 2015 Douglas Karr
Ny fanandramana hiditra amin'ny pejy valin'ny fikarohana ho an'ny teny lakile manokana dia mety mitaky asa betsaka. Gaga aho amin'ny isan'ny orinasa eo an-toerana, na izany aza, tsy manararaotra Google Business Business. Niara-niasa tamin'ny tiako indrindra aho Indianapolis Coffee Shop, The Bean Cup, ahazoana milina fikarohana tsara… fa ny dingana voalohany dia ny miantoka fa voatanisa ao amin'ny sarintanin'i Google izy ireo:
Raha manao a hikaroka ao amin'ny Google ho an'ny fivarotana kafe Indianapolis, alohan'ny hisian'ny valin'ny fikarohana dia misy sari-tany miseho miaraka amin'ireo fivarotana kafe rehetra ao Indianapolis.
Ny resaka fidirana amin'ity sari-tany ity dia tsy resaka laza, fa resaka fisoratana anarana ho an'ny Google Local Business fotsiny. Ny fisoratana anarana sy ny famantarana ny toerana misy anao ao amin'ny Google Local Business dia mametraka anao amin'ny valin'ny motera Google Search malaza aseho ny sarintany - ary koa mametraka anao eo amin'ny sari-tany misy karoka Google Map.
Misy safidy iray taonina ihany koa - mampakatra sary, tapakila, nomeraon-telefaona, ora fiasana sns ... Tsotra ihany ny fizotry ny fanamarinana… Miantso an-tariby mandeha an-tariby ny laharana orinasa nomena anao i Google mba hahazoana antoka fa ianao tena izy. Raha manana rafitra finday mandeha ho azy ianao dia afaka misafidy ny handefasan'i Google karatra fanamarinana ho anao. Raha vantany vao azonao ilay karatra dia miditra ao amin'ny kaontinao fotsiny ary ampidiro ny kaody fanamarinana.
Inona no miandry? Apetraho amin'ny sarintany ny orinasanao anio! Voalazako ve fa maimaim-poana izany?
Tags: Google mapsorinasa eo an-toerana googleGoogle MapsGoogle+ Local
Haino aman-jery sosialy sy ny fiasan'ny mpiasa
Mar 25, 2010 amin'ny 11: 20 AM
Tena ilaina amin'ny orinasa rehetra eto an-toerana izany. Manome ny fitarihanao sy ny mpanjifanao mety hahatsapa fa eo ianao miandry azy ireo handeha. Ny fametrahana ny orinasanao eo an-tampon'ny valin'ny karoka sy ny valiny mihoatra ny iray dia miteraka fiatraikany lehibe amin'ny mpanjifanao. Tsy azon'izy ireo antoka fa tsindrio ny rohinao!
Mitadiava torohevitra fanampiny ary ampidiro ny resaka ao amin'ny Startups.com!